Fanodinana ny masinina, ny fanodinana ireo singa miovaova - K-Tek
K-Tek Machining Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2010, miorina amin'ny "World Factory" -Dongguan, Sina, manarona faritra mihoatra ny 20 000 metatra toradroa, manampahaizana manokana amin'ny fanodinana ireo faritra milina ary nandalo ny fanamarinana ISO9001: 2015 .
Azontsika atao ny manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, vokatra mifandraika amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fiara, angovo vaovao ary sehatra hafa.
Fanodinana ambony kalitao
Mba hiantohana ny fitakiana kalitaon'ny mpanjifanay dia nanafatra fitaovana fanodinana mandroso sy fitaovana fitiliana toy ny Machine dimy axis (DM), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Grinder anatiny / ivelany, Laser Cutting, 3D CMM, Fandrefesana haavo sy mpandinika fitaovana sns avy any Alemana, Japon, Suisse ary Etazonia.
Masinina famaky dimy
Mihodina sy mihodina ny CNC
5 axis CNC machining center dia manome machining mazava tsara amin'ny faritra avo lenta sy be pitsiny.
Fanodinana CNC (3-4Axis)
Omeo serivisy fanodinana CNC 3-axis sy 4 axis.
Mihodina ny CNC (2-12Axis)
Omeo 1-400 (mm) fanodinana CNC sy fikosoham-bary
Omeo fitotoana tsara ny lavaka sy ny faribolana ivelany.
Omeo milina fanapahana tariby marina.
Fitsaboana hafanana sy famaranana
Poloney, anodise, passivation, zinc / nickel / chrome ary plating volafotsy, fitsaboana hafanana sns.
Mifantoka amin'ny olona, ​​fanavaozana mitohy, kalitao sy fahombiazana, mpanjifa aloha.
Tanjon'ny kalitao ：
Mba hahavelomana amin'ny kalitao, nahatratra 95% ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, miezaha hahazo fahafaham-po ny mpanjifa 100%. Ny rafitra kalitao dia miorina amin'ny alàlan'ny ISO9001: 2015 ary natsangana ho an'ny vokatra mekanika avo lenta, mikendry ny hamaly ny fepetra takian'ny mpanjifa hatrany amin'ny fatra farany ambony. Ny rafitra kalitao dia mandray ny maody mifehy ny kalitao mifototra amin'ny rafitra, manarona ny asan'ny orinasa, ny famokarana sy ny famokarana, ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny tontolo iainana ary ny fanaraha-maso 5S, sns.
3 isa mikrometera anatiny
Mpanadihady momba ny fitaovana
Ho fankasitrahana ny mpiara-miasa rehetra amin'ny ezaka sy fandraisana anjara amin'ny asan'ny K-TEK, ary koa hampiroborobo ny fifandraisana eo amin'ny mpiara-miasa, manamafy ny fifandraisana sy ny dockin ...
Rehefa afaka folo taona ny fampandrosoana, K-Tek dia tsy vitan'ny hoe manana mpiasa matihanina sy teknika marobe ary ekipa fitantanana tena tsara, fa manana ekipa mpivarotra tena tsara koa. Mba hamelana ny ...